Maeva74... Ndimby A... Yes, Vote | rafozan-doza |
Maeva74... Ndimby A... Yes, Vote
Published on 11/11,2009
T@ volana Aogositra ah zany rehefa nieritreritra ny hoe hanao blog day dia hoe aleo ireo blaogy famakiko manokana kanefa tsy dia hametrahako comms firy no ho hataoko @ ity taona ity. Tsy vitako moa ilay izy satria somary nisy contraintes kely. Efa natomboko t@ vakiraoka ihany fa nihemotra nihemotra foana dia farany najanoko satria lasa ilay daty... Moa koa hoy ah hoe mba misy dikany ve ity kozy ity satria t@ herintaona ah tsin nanao antso avo hoan'ireo blaogy maty mangingina tao... ny vokany? vao mia nitombo jokotra tsikelikely ireo izay mba namelo maso ny anaran'ny blaogasifera
Dia soa fa nisy ny atao hoe BOMBS, sao dia mbola tsy nifidy ianao? ireto misy blaogy anakiroa izay azonao safidiana. Blaogy famakiko matetika na dia tsy hita mivantana aza fa fanclub ah.
i Ndimby A
Mpanao editorial resaka politika ao @ Tribune i leiry. Zany hoe eo @ 2 ou 3 posts isan-kerin'andro eo ho eo. Midika moa izany fa efa mandalo mason'olona 2 fara fahakeliny ny zavatra avoakany, na dia hoe @ editorial aza. Mba hilazana fotsiny hoe somary professionel izy, ary manana support mediatique matanjaka kokoa noho isika vahoaka majinika.
Dia hanotany nareo hoe dia inona aza no aton'ny mbola hanaovan'le adala be ity pub hoan'io tary io?
Ny valiny dia tsotra fotsiny satria tiako izy tsy hitanareo manamora zavatra be ve io valinteny io... izay tsy nitia taminareo, no aoka hitoraka azy ireo ooo fitiavana blaogy fa sao dia hisy hiteny hoe niova taranja eo ndray ah an
Ny tena antony dia hoe, mafana fo be lery. Izy izany no otran'ny hoe equivalent an'i Jentl fa zany hoe OLP somary objectif. i Jentl moa tsy hizoviana @ tsika intsony. Zany hoe tsy azo fidiana fotsiny izy @ ity taona ity araka ny voalazan'ny fitsarana avo momba ny lalampanorenana. Fa ra misy ny olona tokony ho hajaina sy handohalihana eto @ blaogasifera dia mino marimarina aho fa tsy maintsy tafiditra ao ny lehilahy. i Ndimby indray dia somary mitovitovy @ izay, zany hoe tena resy lahatra sy mafana fo, fa izy @ teny faran'ny tsy hay fotsiny. No izy ihany koa dia miady manokana ny @ hoe tetezamita ikambanana, tsy an'ny atsy tsy an'ny aroa. Tsy misalasala manakihana an'iza na iza refa misy antony mazava, na i tgv io, na i ra8 na ry zafy sy deba aza... Efa manomboka mivoaka ny krizy moa isika izao fa azonareo jerena ny lahatsorany. Hoe efa hatr@ volana Janoary tany lery no hoe somary "mahitsy filaza" sy consitant @ position neutre noraisiny teo @ krizy.
Izy indray no mpampiala voly manan-talenta eto @ blaogy.com. Efa tsy hizoviana @ tsika tsony tokoa ngamba ny momba an'i rado, ilay fitiavako fahiny o?
Eto angamba dia tsy mila manao pub intsony ah fa fantako fa ny ankamaroantsika izay mpandalo eto @ blaogy.com dia mamaky, secretement, ny blaoginy daholo.
Ny antony tena hanohanako azy dia satria mpankafy tantara aho. Ny tantara moa dia anisan'ny hoe fanalana voly sy hoe fampitana soatoavina eo @ taranaka fara mandimby. Otran'ny hoe angano ihany izany fa somary realista kokoa no hoe mahaliana sy mampangitakitaka ee.
Tena hitako hoe fahabangana be eto @ blaogasifera ny hoe olona iray ihany no tena mba manao tantara eto kanefa dia mahaliana tokoa izy ireny. Asa ra tadidinareo ilay hoe tadiom-pitiavana iny, efa elaela ihany izay. Lainga lainga fa tena tsy nisy izay tsy nankafy an'iny kosa ngambany ee. Dia avy eo nisy ilay tantaran'i Soanja iny koa. Efa tsy ao intsony moa ilay izy fa nogidrain'zala i kala soanja... mampatsiaro ny ambiansa teto fahiny ee... good old days... mba aiza doly nareo ireny ee... miverena re olona o.
Soa aloha fa misy an'i kdom izay manomboka manatevin-daharana an'i maeva74. Izy moa tsy dia tena mi-se specializer @ hoe tantara ary efa nambarany fa tsy ny tantara irery no mamaritra ny blaoginy kanefa dia mamporisika tanteraka aho hoe tsara fa tohizo. Deraina tokoa ny ezaka hitondra fahafinaretana sy zava-tsoa hoantsika mpamaky.
Eto aloha dia somary asiana basy atifitra an'i maeva kely ihany. Eny efa niresaka isika momba an'lay mise en forme kanefa mbola tsy ampy le izy an... anisan'ny mampazoto ny olona mamaky ny blaogy ny mise en forme hoe madio sy manitona ary mora vakiana. Ka aza kivy ndriko fa mba jerijereo ihany ny momba an'izay.
Ampiko kely hoe tiako kokoa ra somary atao lavalava, hitanao otran'ny @ serie ireny hoe misy saison 6 na 7 eo ho eo, episodes 20 na 24 isaky ny saisons ny tantara iray vao tapitra. Fangatahana sy fitiavana manokana ny ahy fa ndry no mahita izay mety any. Ho antsika mpamaky kosa dia ankafizo fa tena manan-talenta tokoa izy. Mbola vao nanomboka tsy ela akory ny hoe fitia antsokosoko, ka ndana haingana enjeo fa sao dia tara train eo ka tsy maharaka
Dia aza adino ny mi-BOMBs an. Nominer-o ny blaoginareo, na izay blaogy tinareo.
Misy miteny hoe za ve dia hifaninana @ blaogy efa fanta-daza. Eny, mila misy mifidy betsaka ny blaoginao, izany hoe mila ezaka kely mampafantatra ny blaoginao ianao. Tsia, ihany koa satria ny antony iray anasiana ny hoe mpitsara dia ny mba hoe hi-balancer-na an'zay hoe blaogy malaza sy be mpamaky, versus hoe ny contenu an'ilay blaogy marina... ka hoy ah hoe aza manaiky resy tsy miady izany... VOTE VOTE VOTE!!
Posted by simplex at 23:27 Hametraka hevitra (13) ¦ Verindrohy (trackback) (0) ¦ iozifol